Iqembu Elinciphisa Ukushisa Okushisa Njalo
Abanciphisi be-DWJC Greenhouse (ibhokisi lamagiya)
Izici ze-DWJC Series
Izinciphisi Zokushisa Okushisa (i-gearbox) yamukela igiya le-helical ne-worm gear transmission structure design ngobuciko eliphezulu. Isibungu namagiya ashelical abushelelezi ngemuva kokugaya ukucutshungulwa kwamagiya, umsindo ophansi, ukukhipha okuphezulu torque nokusebenza kahle kokudlulisa.
Kusetshenziswa ukucubungula kwe-aluminium die-casting processing, ukubukeka okuhle, isisindo esincane, ukushabalalisa okuhle kokushisa nezinye izinzuzo.
Ukusetshenziswa kokufakwa phansi nokufakwa eceleni kwenza kube lula ukufaka futhi kunciphise amandla okusebenza kwesifaki.
Ukulawulwa komkhiqizo kuthola idizayini yensimbi ekhawulela umklamo wedivayisi, ukulungiswa okulula komkhawulo, nokunemba okuphezulu kokuma. Ukuma kwemoto yokulawula kungalungiswa ngokungenasizathu phakathi kuka-1 no-75 rpm. Futhi inokusikwa okuphindwe kabili ukuqinisekisa ukusebenza okuphephile.
Izinciphisi ze-DWJC Greenhouse (gearbox) izindawo ezisebenzisekayo: Indlela yokuvula iwindi lokushisa kwezolimo, indlela yokuvula ikhethini, ukuvula nokuvala idivayisi yamandla wohlelo lokungenisa umoya wezilwane, kanye nezikhathi ezahlukahlukene lapho isilinganiso sejubane singalawulwa futhi nohla lokuhamba lungalawulwa.
I-greenhouse-reducer (i-gearbox) -ye-eGibhithe
Ama-Redhouse Reducers (gearbox) Inkomba yezinombolo zeModeli
Ama-Redhouse Reducers (gearbox) Ithebula Lokukhetha leModeli, i-Kw & Ratio
Ama-Redhouse Reducers (gearbox) Umdwebo Wobukhulu Bomkhiqizo
Ama-Redhouse Reducers (gearbox) Ukusebenza kahle ne-Torque Graph
Ama-Redhouse Reducers (gearbox) Imiyalo yemikhawulo yohlobo
1. Qinisa izikulufo ezimbili ezibekiwe ezinamacala ayisithupha eringini elingaphandle le-nut. Lapho isikulufa sijikeleza, inadi ihamba esikulilini. Lapho uthuthela endaweni yokugcina, i-nut izophenduka kanye nesikulufu. Isikulufu eside kumantongomane siguqula intwasahlobo ukuvula inkinobho kuqala. Umshini we-FSQ1 (noma we-ZSQ1) uyama.
2. Uma i-FSQ1 noma i-ZSQ1 yehluleka, umshini uzoqhubeka nokuzungeza. Izikulufo ezinde zizoqhubeka nokuguqula iziphethu ukuvula i-FSQ2 (noma i-ZSQ2) nokumisa umshini. I-FSQ2 ne-ZSQ2 zidlala indima yomshuwalense ombaxambili.
3. Khulula izikulufo ezimbili zokusetha i-hex ukuze ulungise ukuma kwesihlobo se-nut esikulilini ukulawula indawo yokumisa.
Ama-Redhouse Reducers (gearbox) Ukusetshenziswa kwesigcawu
Ama-Redhouse Reducers (gearbox) FAQ Nesisombululo
Ukungasebenzi kahle okuvamile
Ukufakwa kwe-Greenhouse Reducers (gearbox) Ngemuva kwalokho, okuhle nokubi Akukwazeki ukuqala
1. Hlola ukuthi ingabe ulayini wokuphakelwa kwamandla nokulawula ufakwe kahle ngokuya ngomdwebo wiring. Bese uyiqala kabusha.
2. Bheka ukuthi isigaba sentambo yokulawula silungile yini. Le ndlela iwukuthi: gcina amantongomane ajiyile ekuqondeni kokunyakaza, sebenzisa amathuluzi ukucindezela ngokucophelela inkinobho engezansi yesethi engaphambili yamaswidi lapho kuhamba khona ukunyakaza kwenathi. Uma singama, isigaba silungile. Uma ungeke ume, bese ucindezela iqembu lamaswishi aphansi ngemuva kwesikhombisi esinyakazayo lingenza umshini ume, isigaba sibuyele emuva, futhi udinga ukushintshanisa isigaba bese uzama futhi.
3, hlola idivaysi enomkhawulo ukuze ubone ukuthi ngabe kukhona isethi yamaswishi phezulu nangaphansi kokubili ukushintshela Esimweni sokucindezeleka, uma kunjalo, bese ukhulula umakhi osiwe ukuze usethe kabusha iswishi bese uyiqala kabusha.
Ngemuva kokuthi isinciphisi sifike ekugcineni, ukuqala kabusha ngeke kusasebenza kahle noma ngokungalungile.
1, lokhu kwehluleka kufanele kwenzeke ukuvula ikhava yebhokisi lokushintshela, ungathola iqembu Kokubili ukushintshwa okuphezulu nangaphansi kweswishi kucindezelwe phansi, kukhulule izikulufo ezisethiwe, kusethwe kabusha iswishi, kuqale kabusha, futhi kubhekwe ukuthi ukushintshwa kuyinto ejwayelekile yini .
2. Uma kunesimo lapho inkinobho icindezelekile, oxhumana naye kufanele ahlole ukuthi ngabe idivayisi ikhishwe ngesikhathi, uma ingeke ikhishwe ngesikhathi, cabanga ukufaka oxhumana naye esikhundleni.
3. Uma lolu hlobo lokwehluleka lwenzeka, gwema ukucindezela oxhumana naye bese uqala ngenkani umshini. Lokhu kuzoholela ekulimaleni komkhawulo, okuzolimaza nakanjani ukwakheka kokushisa noma kubangele ukulimala kwegiya lokunciphisa ngesikhathi sokusebenza.
isivikelo sokushisa sivuliwe
Umvikeli oshisayo uqala, ekhombisa ukuthi imoto ilayishwe ngokweqile. Kuyadingeka ukuhlola ukuthi ngabe isakhiwo ngasinye sedrayivu sinamaphutha. Akunakwenzeka ukuthi ungakhuphuli ngobumpumputhe manje ukuvikelwa ukuze ugweme ukulimaza imoto.
2.Xhuma kabusha, lungisa umkhawulo
3. Ukuhlolwa nokugcinwa, ukufakwa esikhundleni
1.Engeza uwoyela we-lube
Isinciphisi Esisheshayo nama-gearbox
Ucingo: 0086-571-88220653 / 88220971/88220973 Ifeksi: 0086-571-88220651 / 88220972 WhatsApp / Wechat / Viber / Line / Kakao Talk / Telegram: + 86-13083988828 sicela uxhumane nathi E-mail: [i-imeyili ivikelwe]
Imininingwane © 2002-2018.Ever-Power.biz. Wonke Amalungelo Agodliwe